ကျန်းမာတဲ့ အသားအရည် ကိုပိုင်ဆိုင်မို့အတွက် နည်းလမ်း (၁၀) ချက် ... - Shop Life: A Blog To Complete Your Lifestyle
ကျန်းမာတဲ့ အသားအရည် ကိုပိုင်ဆိုင်မို့အတွက် နည်းလမ်း (၁၀) ချက် …0493
Usman Ghani April 7, 2020 10:20 am April 7, 2020
ကျန်းမာတဲ့ အသားအရည် ကိုပိုင်ဆိုင်မို့အတွက် နည်းလမ်း (၁၀) ချက် ပဲလိုအပ်ပါတယ်နော် …
လှပခြင်း၊ ကျန်းမာတဲ့အသားအရည် ပိုင်ဆိုင်ခြင်းဆိုတာဟာ လူငယ်လူကြီးတွေအကုန်လုံး လိုချင်တဲ့ပန်းတိုင်လေးပါနော် … ထိုအရာတွေကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်မို့ဆိုရင် လွယ်ကူတဲ့နည်းလမ်းလေးတွေကို တိကျစွာလုပ်ကိုင်နိုင်မို့ပဲ လိုအပ်ပါတယ်နော် …
လှပခြင်း၊ ကျန်းမာတဲ့ အသားအရည်လေးကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်မို့အတွက် နည်းလမ်း (၁၀)ချက်ကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော် …
(၁) ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းကို ရှောင်ကြည်ပါ
ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းဟာ အဆုတ်ကို ဆိုးရွားစွာ ထိခိုက်နိုင်ပါတယ် … အဆုတ်ကိုပဲ ထိခိုက်စေခြင်းသာမက သင့်ရဲ့အသားအရည်ကိုလည်း ဆိုးရွားစွာထိခိုက် ပျက်စီးစေပါတယ် … သုတေသနတွေပြုလုပ်ချက်အရ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းဟာ အရေးအကြောင်းများကို ဖြစ်ပေါ်လာစေပြီး အိုမင်းရင့်ရော်မှုကို ဖြစ်ပေါ်လာစေပါတယ် … ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းဟာ အောက်ဆီဂျင်နှင့် အာဟာရဓာတ်များကို လျော့နည်းစေလို့ သင့်ရဲ့အရေပြားကို ဆိုးရွားစွာ လျော့တွဲကျစေပါတယ် …
(၂) စိတ်ဖိစီးမှုများကို လျော့ချခြင်း
အလုပ်တွင် စိတ်ဖိစီးခြင်း (ဒါမှမဟုတ်) မိသားစု၊ သူငယ်ချင်း၊ ချစ်သူများနှင့် စကားများရခြင်းတို့ကြောင့် စိတ်ဖိစီးမှုများကို ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်နော် … စိတ်ဖိစီးမှုသည် ကျွနု်ပ်တို့၏ အရေပြားအပေါ်တွင် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအရ ဆိုးရွာစွာ သက်ရောက်စေပါတယ်… စိတ်ဖိစီးမှုသည် အရေပြားကို အဆီပြန်စေသော ဟော်မုန်းများထုတ်လုပ်မှုကို တိုးပွားစေပါတယ် … ဝက်ခြံဖြစ်စေသော ဘက်တီးရီးယားများကို ကာကွယ်ရန်ခန္ဓာကိုယ်၏ စွမ်းရည်ကိုလည်း လျော့နည်းစေပါတယ်… သင်၏စိတ်ဖိစီးမှုများကို ဖြေလျော့ရန်အတွက် ယောဂကစားခြင်း၊ တရားထိုင်ခြင်းတို့ကို အချိန်မှန်စွာ ပြုလုပ်ပေးသင့်ပါတယ် …
(၃) နေရောင်ခံကာကွယ်လိမ်းဆေး ပုံမှန်လိမ်းပါ
ပြင်ပသို့သွားသည့်အခါတွင် နေရောင်ကာကွယ်ရန် (SPF 15 သို့မဟုတ် ထိုထက်များသော) နေရောင်ခံကာကွယ်လိမ်းဆေးကို အသုံးပြုသင့်ပါတယ် … ၂ နာရီတိုင်း တစ်ကြိမ် ပြန်လည်အသုံးပြုသင့်ပါတယ် … ဦး ထုပ်များ၊ လက်ရှည်အင်္ကျီများနှင့် ဘောင်းဘီများသည် သင့်အသားအရေကို နေရောင်ခြည်မကျရောက်စေရန်အတွက် ကူညီပေးနိုင်ပါတယ် …
(၄) ကျန်းမာရေးနှင့် ညီညွတ်သော အစားအစာများကို စားသောက်ပါ
ကျန်းမာသောအစားအစာသည် သင်၏ကျန်းမာရေးနှင့် သင့်အသားအရေကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေပါတယ် … သစ်သီးများ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၊ အစေ့အဆန်များနှင့် ပရိုတင်းများပါဝင်သော အစားအစာသည်သင်၏အသားအရေအတွက် အကောင်းမွန်ဆုံးဖြစ်ပါတယ် … အခွံမာသီးများနှင့် ငါးများသည် သင့်ခန္ဓာကိုယ်မှ မကောင်းသောအဆီများကို ဖယ်ရှားရန်အတွက် အထူးသင့်တော်ပါတယ် … ဆိုဒါနှင့် သကြားများကိုတော့ အတတ်နိုင်ဆုံး လျှော့ချပေးပါ ….
သင့်အသားအရည်ရဲ့ ကျန်းမာရေးအတွက် အစိုဓာတ်ကိုပြန်လည်ထိန်းသိမ်းမို့ရန်အတွက် ရေများများသောက်ပေးရန် လိုအပ်ပါတယ် … ထို့မှသာ သင်၏ ခန္ဓာကိုယ်အတွင်း ရှိနေသော အပြစ်အနာအဆာများကို ဖယ်ရှားပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ် …
(၅) အသားအရည်ကို ပုံမှန်ထိန်းသိမ်းပေးခြင်း
သင်ရဲ့ အသားအရည်ကို ပုံမှန်သန့်စင်ခြင်းဟာ အလွန်အမင်း အရေးကြီးလှပါတယ် … သင်ရဲ့ သန့်စင်ခြင်းဟာ မကောင်းသောအညစ်အကြေး၊ ဖုန်မှုန့်နှင့် ပိုးမွှားများကို သန့်စင်ဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါတယ် … ပြင်းထန်သော မျက်နှာသစ်ဆပ်ပြာများကို မသုံးရန်နှင့် မျက်နှာကို ငြင်သာစွာ သစ်ပေးရန်လည်း လိုအပ်ပါသေးတယ် …
အရေပြားကို အစိုဓာတ်ပေးရန်အတွက် ရေသောက်ခြင်းသည်သာ လိုအပ်ခြင်းမဟုတ်ဘဲ သဘာဝအစွမ်းအတိုင်း သင့်ရဲ့အသားအရည်ကို ကူညီရေဓာတ်ဖြည့်ပေးဖို့ရန်အတွက် Moisturizer ကိုလည်း အသုံးပြုပေးသင့်ပါတယ် ..
(၆) မျက်နှာအသားအရည်နှင့်ပတ်သတ်သော ကုထုံးများ လုပ်ဆောင်ပါ
အသားအရည်နှင့်ဆိုင်သော ကုထုံးများကိုတော့ ယနေ့ခေတ်တွင် အများဆုံးလုပ်ဆောင်လာကြပါတယ် … အသားအရည်ဆိုင်ရာ ကုထုံးများတွင် အရေပြားများနှင့် ချွေးပေါက်များကို နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းသန့်ရှင်းစင်ကြယ်စေပြီး အိုမင်းရင့်ရော်ပြီး ခြောက်သွေ့သော အသားအရေများကို ပြန်လည်နုပျိုစေပါတယ် … ထို့ကြောင့် မျက်နှာအသားအရည်နှင့်ပတ်သတ်သော ကုထုံးများကို နှစ်ပတ်တစ်ကြိမ် (သို့) တစ်လတစ်ကြိမ်ပြုလုပ်ပေးသင့်ပါတယ် …
(၇) အိပ်ချိန်ကို သေချာရယူပါ
ကောင်းမွန်စွာ အိပ်မောကျခြင်းဟာ သင့်အသားအရည်ကို ကောင်းမွန်စေပါတယ် … ကျန်းမာသောအသားအရေအတွက် ညစဉ်ညတိုင်း အိပ်ရေးဝဝ အိပ်စက်ခြင်းဟာ မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အရာပါ …. သင်အိပ်စက်နေချိန်အတွင်း သင့်အသားအရေနှင့် တစ်ကိုယ်လုံးဟာ ကောင်းမွန်စွာ အနားယူပြီး အသားအရည်ကို အကောင်းဆုံး ပြန်လည်ပြုပြင်ပေးတာကြောင့်ပါ .. သင့်ရဲ့အိပ်ချိန်ကို တစ်ရက်တာအတွက် ၆ နာရီမှ ၈ နာရီအတွင်း အိပ်စက်ပေးသင့်ပါတယ်…. ကောင်းမွန်စွာ အိပ်စက်ခြင်းမရှိပါက စိတ်ဖိစီးမှုများကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပြီး သင့်ရဲ့အသားအရည်ကို ဆိုးရွားစွာ ထိခိုက်စေခြင်းကြောင့်ပါ …
ဒါ့အပြင် အသားအရေကို ထိခိုက်စေနိုင်တဲ့ အဆီနဲ့ဆီများ စုပုံလာခြင်းကို ရှောင်ရှားနိုင်ရန်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့၏ ခေါင်းအုံးများနှင့် စာအုပ်များကို သန့်ရှင်းစွာ ထားရန်လည်း မမေ့သင့်ပါ ။
(၈) Scrub များကို ပုံမှန်အသုံးပြုပေးပါ
သင်၏အသားအရေကို ပုံမှန် Scrub ပြုလုပ်ပေးခြင်းဖြင့် သင်၏အသားအရည်များ၏ ရလဒ်များကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်စေပါတယ် … အရေပြားတွင် ဆဲလ်သေများကို ဖယ်ရှားရန်အတွက် Scrub များကို ပုံမှန်အသုံးပြုပေးပါ … သို့မှသာ ဆဲအဟောင်းများကို ဖယ်ရှားပေးပြီး ဆဲလ်သစ်များဖြစ်ပေါ်ကာ သင်၏အသားအရည်ကို ကောင်းမွန်စေမှာ ဖြစ်ပါတယ် .. . ချွေးပေါက်များ ပိတ်ဆို့ခြင်းမှလည်း ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ် … Scrub များကို တစ်ပတ်လျှင် နှစ်ကြိမ်သာ ပြုလုပ်ပေးသင့်ပါတယ် …
(၉) မိတ်ကပ်လိမ်းခြင်းကို လျှော့ချပါ
မိတ်ကပ်အလှပြင်ခြင်းကို တတ်နိုင်သမျှ လျှော့ချပေးပါ … အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် မိတ်ကပ်များသည် အရေပြားကို ပိတ်ဆို့စေပါတယ် … မိတ်ကပ်များသည် အရေပြားကို ပျက်စီးစေတာကြောင့် တတ်နိုင်သမျှ မိတ်ကပ်လိမ်းခြင်းကို လျှော့ချသင့်ပါတယ် … အိပ်ယာမဝင်ခင် သင်၏မိတ်ကပ်များကို သေချာဖယ်ရှားပေးရန် လိုအပ်ပါတယ် … မိတ်ကပ်ကို နေ့ညလိမ်းခြယ်ခြင်းသည် အသားအရည်ကို ဆိုးရွားစွာ ထိခိုက်နိုင်ပါတယ် …
(၁၀) ပုံမှန်လေ့ကျင့်ခန်း ပြုလုပ်ပေးပါ
ပုံမှန်လေ့ကျင့်ခန်း ပြုလုပ်ခြင်းသည် ကျန်းမာရေးအတွက် ကောင်းမွန်စေရုံသာမက သင်၏အရေပြားအတွက် ကောင်းမွန်စွာအထောက်အကူပြုနိုင်ပါတယ် … လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တဲ့အခါ သင့်ခန္ဓာကိုယ်တစ်လျှောက် သွေးလည်ပတ်မှုကို ကောင်းမွန်စေပြီး အောက်စီဂျင်နှင့်အာဟာရများကို အရေပြားဆဲလ်သို့ သယ်ဆောင်စေပါတယ်… ချွေးပုတ်များကို ထွက်စေတာကြောင့် သင့်ရဲ့အသားအရည်ကို ကောင်းမွန်လာစေပါတယ် …
အထက်ပါအချက်များသည် လိုက်နာရန်မလွယ်ကူသော်လည်း ရရှိလာနိုင်သော ရလဒ်မှာ အကောင်းဆုံးဖြစ်လာနိုင်စေပါတယ် … လှပခြင်း၊ ကျန်းမာတဲ့အသားအရည် ပိုင်ဆိုင်ရယူလိုက်ပါနော် …
🛡 Shop.com.mm မှပစ္စည်းပို့ဆောင်ပေးသူများဟာ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကအကြံပြုထားသော ကာကွယ်မှုများကို ထိရောက်စွာလိုက်နာပြီး ဝယ်ယူသူများထံသို့ လုံခြုံစိတ်ချစွာ ပို့ဆောင်ပေးနေပါတယ်။ဒါ့ကြောင့် အိမ်မှာနေပြီး အွန်လိုင်းကနေ ဈေးဝယ်လိုက်ပါ …🛡
Previous Articleသင်ဟာ ကျန်းမာရေးလိုက်စားသူ ဟုတ်မဟုတ် ဒီမေးခွန်းလေးတွေဖြေကြည့်မယ်Next Articleအိမ်မှာနေနေရတဲ့အချိန်မှာ ရလာတဲ့စိတ်ဖိစီးမှုကို ဘယ်လိုလျှော့ချမလဲ?
ဆံပင်ကျွတ်ခြင်းမှ ကင်းဝေးစေနိုင်မည့် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းများ…